Qala IJamani Journal Tenerife Ingxaki ye-Albayzin (Trasmediterranea)
Ingxaki ye-Albayzin (Trasmediterranea)
28. Julayi 2017
Ingxaki ye-Albayzin media kasaan, i-2017
Ukunyanzela ukungabi nantoni
Ehlotyeni, abantu abaninzi beeholide baxela iziganeko ezixakekayo kwi-ferry Cádiz ngokuthi Santa Cruz de Tenerife.
Cadiz, iindaba ze-kasaan, i-2017
Isibheno sisebenzisa, sisicatshulwa esingcolileyo, ukuba singabibizi ezi zinto ezibonakalayo.
Abasebenzi babedlala, abanye babecala kakhulu. Le ngqiqo yaqinisekiswa ngohambo lwethu.
Emva kokuhlola entweni encinanana, terminal kunokuba zimbelwe Cádiz, ibe ngaphezu koomatshini zekofu etyeni, itshekhi-in iimpahla kunye nezinye njengezikhumbuzo, abakhweli nje "phakathi sipakwe" kangangesiqingatha seyure phakathi Guardia Civil and enqabeni yokuphatha kuba ukusebenza akayi ku , Uziphatheka ngokuphuka kunye nengxoxo.
Port e Cadiz
I-ferry iyagijima phantsi kweflegi yaseCypriot, kwinkampani yaseSpain yokuthumela Trasmediterraneaelonwaba enye yeyona nto idume kakhulu kunazo zonke kwii-Canaries. Akukho mntu, ngesikebhe esivela kuso Trasmediterranea esele iqhutywe, inento enhle ukuyibika malunga neenkampani ezinobungozi ezinobungozi nabakrakra. Trasmediterranea senza umkhondo njengoluhlobo lomntu ongu-monopolist, kwaye ubu bukho bendalo buqonda ukuba inkampani yokuthutha ixhaphaze kwaye ingavumi. Akukho nanye kulabo abanikezwa kwincwadana eluhlaza kwaye iboniswe imifanekiso enemibala okwenyaniso. iyinto engcolileyo, igugile, isetyenziswe kwaye igugile. Amakhanda akhangeleka njengamaseli entolongweni.
I-stench engapheliyo-Into ekhangeleka kakhulu, iyahlukana
Imali ukuba ngokwenene sprengt- ngalunye lobukhulu abanye abaqhubi babaqweqwedisayo izithuthi zabo phezu phenyane endleleni Tenerife, kufuneka ukuya 1.300 € ihlawulwe. Abahambi bafuneka ukuba bakhuphe i-cabin okanye i-pullman chair. Eli sihlalo alifanelanga igama.
I-armor ye-Pullman iya kwiindawo ezingamangalisi, izindlu zangasese zingcolile. Kwakhona nakwiikhamishi azibukeka zingcono. Ibhedi isasetyenziswa, akukho mntu ufuna ukulala.
Akuzange ihlambuluke, udoti ovela kubahambi ngaphambili, kusekho ibhakethi elingcolileyo ecaleni kwesitya, ukuba ufuna ukubiza umnqanawa njengolu. Ubuninzi bomnkantsha wamanzi we-chlorine, indlu yangasese iyinto engcolileyo kwaye ingcolile.
I-atmospheric ikhangeleka ukusuka kwi-1990 ern, ngaphezu kweentambo zokutya, ezibizwa ngegama layo kuphela kwi-hearings.
Akukho ndlela yokunceda ngexesha lokukhwela, makungabikho iingcebiso ezinikezwayo, yintoni oyenzayo kwimeko engxamisekileyo. Omnye uyazibuza.
Akukho myalelo owenziwe, ngamanye amaxesha uphupha ngaphandle kwe-loudspeaker. Naliphi na isandi esikhohlayo ongenakukuqonda.
Trasmediterranea Ngokuqinisekileyo ukufudula abagibeli-ngobusuku bokuqala, ukungonwabi kwindawo yokubhema, kwibhar, bubanzi. Ii-sandwiches zePappige zinikwe, ezingenanto nto enokuyenza ngayo ngokumelela okubonakalayo kwi-prospectus.
Isitulo seenqwelo ezivunyiweyo kunye negrisi yezizukulwana
I-Licky inyama ehlanganiswe ne ketchup
Yinqweno kunye nenyaniso. Abasebenzi kwi-bar bazama ukwenza ubuhlobo. Ingumdlalo ophezulu, inkampani yokuthumela ifaneleka kakuhle ukuya kwabakhweli be-1000, ngokugqithiseleyo kotywala.
Ukongeza, "Smoothies"I-Hawkish, eneentlobo ezinyanyekayo, ichanekile kwaye iyakhonza kwizinto ezithile ezisetyenzisiweyo, ezihlambulukileyo.
Umhluzi ongenakulinganiswa owenziwe ngohlobo lwejam
Amanye amaTaliyane atywala iwayini eninzi, i-rum ne-cola, ngoko uthi uyalala. Njengoko iinqanawa ziphela kwaye idizili enamandla iyagijima, iyancazela emkhombeni ukuze ikhuphe i-fumes.
Isidlo siyancibilika, kodwa sibandakanyeka kwi-fare. Kufuneka ulandele umgca kumgama omde, kwaye ufumana ukutya okusezantsi. Izithako zizinto ze-B, uya kuluva okufanayo. Yonke into iyakuthanda imdala kwaye imbi.
Yisoloko isaladi efanayo, enye i-mayonnaise, i-mush engeyiyo ephekwe kunye kunye nohlobo lwe-goulash obangela i-nausea. Iingxenye zilinganiswa ngendlela i-Stuarts inokulinganisela ngayo isibalo somzimba womgibeli. Njengoko iza kwenziwa phambi kokuba umkhweli funny emva sloppy sembethe-counter wamxelela akazange kufuneka ke adle kakhulu njengoko okanye baba ngamanqatha kakhulu phofu. Ukutya akufanelekanga ukubizwa ngokuba kukutya konke, ukuba ufuna ukutya, ungadla kwi-bar - kwaye ukutya kukubi kunokuba ufumana.
Omnye uyazibuza xa uphando lophengululo lobugcisa lwenzeka kwaye apho, ekugqibeleni, nokuba ngaba umhloli mhlawumbi uyimpumputhe. Ubomi beempahla kunye neenqanawa azifaki kakuhle, unokuzibona ezi zinto zivela kwiindawo zokugcina izitshixo kunye neziqhumane.
Ngxakeko, ukukhutshwa akuvuli
Abanye bavunyelwe ukulala emakhaya abo emasimini, abanye bagwetywa ukuba bathathe nawaphi na amakhonkco aphelela kwi-maze yee-corridors. Mhlawumbi ixhomekeke kuphela kwisicatshulwa sokunika amadoda ukuba alele kwizithuthi zawo.
Enye ifilimu ukutya kukhwankqisiwe. Ufuna ukuyibika ekhaya kwaye ubhale ingxelo malunga Albayzinyinto yokwaphuka. Awunakukwazi ukubona ukuba iinqanawa zakhiwe, okanye ukuba yinto ekhethiweyo Trasmediterranea na. Mhlawumbi abo bahlala kwikomkhulu eMadrid, abanakucinga ukuba kwenzekani kwi nqanawa - awukwazi ukuqiqa.
I-2: Iwashi le-00, akukho mntu ongalala, abaninzi banqumla emkhunjini, ezinye zisekho kumatshini okutyalwa. I-intanethi, esebenza kuphela kumhlaba kunye nje kuphela, kwaye ngoko ngejubane edala ukuvalelwa kwe-Retro, ayisasekho. Abanye basasaza kwi-bar. Into efanelekileyo kukuba "smoothie", Ngenxa yexabiso elibi lee-euro. Ixutywe kwiingxowa kunye neziqhamo kunye ne-ayisikrimu encinane kumatshini ococekileyo.
Abaninzi balele ezihlalweni kuba babengenakukwazi ukuthenga i-cabin. Abaphulaphuli bamazwe ngamazwe kwaye akukho mntu uqonda umkhumbi njengombali ozukileyo wembali yaseSpain. Wonke umntu uthemba ukuba uhambo luya kudala kungekudala. Abasebenzi banqabile kakhulu kwaye badangalisa, kuphela kwibha yintsapho encinci. Yonke into eyenzekayo kule festile yinto yokukhohliswa komgibeli kunye neengxaki ezingamangalisa, ngamanye amaxesha.
Inkampani kumzali Acciona Inkampani esebenzayo yaseFransi, ebizwa ngokuba yi-conglomerate, ngokucacileyo ibenze abasebenzi baseMorocco baseTurkey.
Ngokuqinisekileyo, akukho nto kuthiwa yenzakaliswa ebhodini, isihlalo esibukroti sidilika, esinye isitulo, abagibeli bahamba nje ngokukrakra, kule fenitshala ziphuma ezikhonkwane. Iziseko azisebenzi, ngoko ibhetri ye-radiotelephone igqiba ukunikela umoya. I-Blame kuphela ngumgibeli, wayeyisithakazelo kwaye waqhuba umgca.
Nabani na olimaza ebhodini, yiyakho inkohlakalo, akukho myalelo wokhuseleko. Ubuzwa ukuba umntu uthetha ukulimala kabuhlungu kumqhubi wenqanawa, akushiywanga, kuba oku akufuni ukuphazamiseka, nokuba yintoni enokwenzayo.
Iilwanyana ezigcinwe kwikhedi yeloli kwintlobo yesitya iphathwa njengama-felons. Akukho nto yokuziva inhlalakahle yezilwanyana, kodwa kunokunyelisa okungaqhelekanga kubahlobo abane abaneemilenze. Akukho mnikazi weenja kufuneka enze oku kwilwanyana yakhe. Uhambo lwalukho, okokuqala, ukusuka eCadiz, emva komnye usuku, olukhokelela kwiGran Canaria, eyona nto, into ongayenza ngeholide.
Ukusuka kumhloli wethu ufumana "Albayzin"Ibakala eyanele kwaye oko kusasaza. Inkampani yefestile izama ukwenza imali ngeendlela zonke. Ukuhaha ngemali ngaphandle kokusebenza kuyo yonke indawo. Ivenkile ihlelwe kakuhle, kuphela i-cigarettes ixabiso elincinci kunelo lizwe, iindidi ezininzi zeengqumba zibiza ngaphezu kweJamani. Ngaphandle koko inqanawa ayikho into emangalisayo yokunikela ngaphandle kokunyelisa. Kukho enye ibha encinci ephantsi kwendawo yokudlela ecetyisayo ehlazo.
I-2004 isebenze Albayzin yenza umtsalane ophelile. Inkampani yomzali eMadrid ayifuni ukuphawula ngeziganeko ebhodini, nangona zicelo ezininzi. Uhambo olungafanelekanga. Akunconywa, ngubani onothutho ukuthutha kwii-Canary, kufuneka alungiselele ngakumbi i-arhente yokuthumela kunye nokuzibhela.
Ngaphandle kweTenerife Part 1 (kwakhona)
Iipilisi ezivela kwiingalo zentonga
Inqaku langaphambiliUhambo olutshane oluya eSwitzerland
Inqaku elilandelayoUlahlekile: uMasta Suchet (ubuyekeze kwi-29.7.)
UFranz 4. Februar 2018 at 21:30
Akukho nanye yeengxelo ezimbi esingayiqonda.
NgoDisemba saqhuba i-2017 kunye ne-ALBAZYN esuka eCadiz ukuya eLas Palmas. Ngemithuthuthu emibini kwaye ngaphandle kwekhampasi. 222 EUR ngomntu kunye nebhayisikili. Ukutya kwakukho "isantya-standard", yonke into yayihlambulukile, njengoko kunjalo kwiindawo ezinjalo zoluntu. Abasebenzi babenobungane kwaye bahloniphekile.
Nantsi kubonakala sengathi ulahlekile ukuwela iinqabana ngesikebhe.
Umhleli 5. Februar 2018 at 11:57
Oku kunokuthi, emva kwinqaku labantu abaningana baye babika, ngubani owenza amava afanayo kunye no-Albazyn.
Ndiyathokoza kukuba wanikezela ngempendulo enhle, yinto yokuqala esiyivile ngayo.
Ndichitha iminyaka kunye no-Albazyn, ukusuka eKardi naseKardiz. Ukuhamba kwam kuqala kwakukho i-1996, ke umgca wodwa kumzila kunye nesikebhe sasincinci kune-Albazyn kwaye kubiza kakhulu. Kwafika ke ekuqaleni 2000er inqanawa entsha, enkulu kakhulu pool ngaphakathi, imivalo eziliqela kunye bhanyabhanya, Disothek njalo, kodwa isikhokelo iminyaka 2 kuphela wafika Albayzin. Ndiqhuba umzila kabini ngonyaka, kuqala ngemoto, ukususela kwi-2012 kunye ne-motorhome. 2008 Ndaya kanye kunye armas ukuya Portimao (Portugal), Price 300, - € 2 abantu imoto +, le ndlela iye yabekelwa kwaye armas ngemoto ke Huelva.
Ekuqaleni, iArmas yayingabizi ngaphezu kweTransmediterranea. Ekubeni kuhlawulelwa i-Trasmediterranea nangoku 850 ezinqabileyo, - € abantu 2 kunye imoto kunye cabin (kubandakanywa abahlali zingalujongi ca.120, - €) ngoko Bathoba amaxabiso omabini imigca malunga efanayo ixabiso. Kwiminyaka emibini edlulileyo, endinaye armas kunjalo 560, - € ihlawulwe kubantu 2 kunye mahamba ngaphandle cab, kunyaka ophelileyo apho kakade phantse 700, - € ukuba umntu ngaphandle ikhabhathi mahamba. Ngoku sele ulihlawulele itikiti lam lo hlobo kwi Trasmediterranea, abantu 2, cabin 2, mahamba netreyila 775, - €. Ok zombini imizila isebenzise indawo yabo ekhethekileyo kwindlela, kodwa ngenxa yeArmas kukho ukunyakaza okunye. Ngokuqinisekileyo, "ukutya" kufakwe kwi-Trasmediterranea, umgangatho wekhitshi uhlala uhluka, ngamanye amaxesha amaxesha amaninzi amabi kakhulu kuxhomekeke kwinkwenkwe yenkwenkwezi eyenza njengompheki. Ngexesha elide ungadla into ethile. Kodwa nangona umgca weArmas awulungile, ngamanye amaxesha kunzima nakakhulu ukuba awuyena nje umtshutshisi we-gatschiegen antipasta. Kwaye oko kufuneka uhlawule imali yangempela. Abantu abaqeshwe njengompheki bebenokuba ngabagadi begadi okanye abagadi bepaki. Andikwazi ukucinga, ukuba izitya ezinjalo zilungiselelwe ngumntu owaye waqeqeshwa njengompheki ngumpheki. Nokhuseleko Kwakhona sele wagxeka yi abahloli ye-ADAC kwiminyaka eyadlulayo, akukho nto iye yatshintsha kangaka. Ndifunda kwiphepha laseSpeyin lokuba amagunya anemigangatho yeCanary Islands ayifani njengaleyo e-Balearics okanye kwisiCatalan. Ngoko ke, iinqanawa ezibekwe kakuhle zihamba ngezinye iindlela.
Ngokuqinisekileyo akufanele ulindele ukuxhamla, kufana nebhasi eliqhelekileyo, ukungabikho kwinqanaba lokuqhuba, akukho xesha lokulungiswa, ngelanga. I armas iye waxelela Trasmediterranea ukugqithisela ukuba kancinci ngokukhawuleza kunye neeyure ngaloo ezimbalwa ngaphambili ifikelele nemisinga e Huelva, kwaye ke kufuneka achithe ubusuku omnye kuphela kwi nokomninimkhombe kwi lokuya Cádiz. Ukuba ihlala ixakeka xa kuqaliswa mhlawumbi ngenxa yeengqondo ze-Spanish-Canarian, kodwa ngandlela-thile ihlala isebenza, iyandibuza ngokuphindaphindiweyo.
I-PS: I-Albazyn kufuneka yakhiwe i-2004 kwaye kufuneka iqhutywe ngaphambili kwindlela yase-Italy, kuba ezinye iimpawu ziyafumaneka kwiItaliyane kwinqanawa
Sineengxaki ezifanayo. Emva konyaka. Ungaze uphinde uphendule le ferry.
Okwangoku 28.11.18 ndlwana uhlambulukile ... moya umoya kulungelelaniswa ngokuvula Screw kuba umoya unikezelo ... ukutya sidliwe ngezantsi avareji ... ngaphantsi ngcono Internet kuya kuba ngakumbi ... kade njengoko ngoku ngaphezulu ... Boat ngonyaka rhoqo, nakuba ulwandle ludambe ... ulahlekile somfanekiso ngalinye ... isaphulelo sokuhlala kuphela kwiiCanary Islands. unokufumana isitifiketi seendawo ezahlukahlukeneyo eSpeyin ... Ukuzivocavoca ngesicelo ... ngokwenene! Abasebenzi ngoku ngakumbi kwiLatin America ... Abasebenzi ngoku abaninzi bevela eLatin America ... Ukhuphiswano luya kuba luhle